एकल प्वाल नल बाथरूम कालो
घर / बाथरूमको नल / एकल ह्यान्डल बाथरूम नल / वाह वाहक सिंक नल मैट कालो
वाह वाहक सिंक नल मैट कालो
म्याट कालो बाथरूम नल तपाईं एक मा डिजाइन र गुणवत्ता प्रदान गर्दछ। प्रभावशाली प्रदर्शन र
एक आश्चर्यजनक सुरुचिपूर्ण शैली। अब हाम्रो म्याट कालो बाथरूम नल किन्नुहोस्!
2321501B स्थापना निर्देशन
म्याट कालो बाथरूम नल 2321501B
तपाईको बाथरूमको डिजाईन एक पुरस्कृत परियोजना हो। जे होस् तपाई सामान्य रूपमा तपाईको बाथरूममा धेरै समय खर्च गर्नुहुन्न, तपाईले यो ठाउँ लामो समयसम्म आराम गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, उदाहरणका लागि तपाईको व्हर्लपूलमा। जे भए पनि, तपाइँले तपाइँको बाथरूम डिजाइनको प्रभावलाई कहिले पनि हल्का ठान्नु हुँदैन। यो तपाईंको घरको समग्र डिजाईनको हिस्सा हुनुपर्दछ र डिजाईन र कार्यक्षमताको हिसाबले यसलाई राम्रोसँग सोच्न तपाईंको समयको योग्य छ।
एक बाथरूम तपाईं दुवै डिजाइन र कार्यक्षमता को सन्तुलित सेट प्रस्ताव गर्नुपर्छ। कार्यक्षमता अत्यन्त महत्त्वको हुन्छ, किनकि प्राय जसो तपाईं आफ्नो बाथरूमको आधारभूत कार्यहरू प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ। उदाहरणको लागि नुहाउने र दाँत माझ्ने जब तपाईं बिहान हुनुहुन्छ। अर्कोतर्फ, विशेष गरी जब तपाईं आरामको दिमागमा हुनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो बाथरूम डिजाइनको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, उदाहरणका लागि तपाईंको बाथ टबमा आराम गरेर। एक बाथरूम डिजाइन को राम्रो कुरा यो हो कि तपाईं आफ्नो सृजनात्मकताको सबै यो भित्र राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ लाखौं विकल्पहरू छन् जब बाथरूम डिजाईन गर्दा, र जे तपाईं निर्णय लिनुहुन्छ, तपाईंसँग अनौंठो सजावट हुनेछ जुन अरू कसैसँग हुँदैन। र तपाईं यसको एक मात्र डिजाइनर हुनुहुन्छ। तपाईं आफैंलाई म्यागजिनहरू र वेबसाइटहरूद्वारा प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ, तर अन्तमा तपाईं आफ्नो बाथरूम कस्तो देखिन्छ भनेर निर्णय गर्ने एक हुनुहुन्छ।
कालो मा एकल प्वाल बाथरूम नल
जब तपाईं आफ्नो आदर्श बाथरूम डिजाइन गर्नुहुन्छ, तपाईंले कहिल्यै बाथरूमको नलको प्रभावलाई हल्कासित लिनु हुँदैन। बाथरूमको नल कुनै पनि बाथरूमको प्राकृतिक केन्द्र बिन्दु हुन्, मानिसहरू सधैं तपाईंको नललाई पहिले हेर्दछन्। तसर्थ तपाईले सँधै ध्यानपूर्वक तपाईको बाथरूम फाल चयन गर्नु पर्छ। कार्यक्षमता बाहेक, तपाईं आफ्नो बाथरूम प्रभाव र तपाईं गर्व हुनुहुन्छ कि एक शैली फिचर गर्न चाहनुहुन्छ। यसको मतलब यो हो कि तपाईले बाथरूमको नलका प्रकारका लागि छनौट कहिले पनि छाड्नुहुन्न जब तपाईं पहिले नै आफ्नो बाथरूम बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईले बाथरूम डिजाइनको बाथरूम डिजाइनको अभिन्न अंग बनाउनु पर्छ।
तपाईको बाथरूम सिinkको सम्बन्धमा, तपाई धेरै प्रकारको बाथरूम सिink्खा नलबाट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं या त डबल ह्यान्डल बाथरूम faucets वा एकल ह्यान्डल बाथरूम faucets छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। एकल ह्यान्डल बाथरूम faucets एकल प्वाल बाथरूम faucets को रूप मा पनि चिनिन्छ। एकल ह्यान्डल बाथरूम faucets को मुख्य फाइदा यो हो कि तपाईं केवल एक हातले पानीको तापमान नियन्त्रण गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। अर्को लाभ भनेको स्थापनाको सहजतासँग गर्नुपर्दछ। जस्तो कि तपाईंलाई केवल एउटा प्वाल चाहिन्छ, एकल प्वाल बाथरूम नल स्थापना गर्न यो धेरै सजिलो छ। एकल प्वाल बाथरूम faucets सबै प्रकारको शैली र डिजाइन मा आउँछ। WOWOW को म्याट कालो बाथरूम नल तपाईंलाई एक सुरुचिपूर्ण डिजाइन प्रदान गर्दछ जुन ठ्याक्कै बोल्ड र अद्वितीय रंगमा gooseneck जस्तो देखिन्छ।
स्टाइलिश र फंक्शनल म्याट कालो बाथरूम नल
WOWOW को स्टाइलिश र अझै कार्यात्मक म्याट कालो बाथरूम नल दुबै सरल र कालोहित हो। बाथरूम उपकरणको यस राम्रो टुक्राको प्रत्येक ईन्च कुनै पनि क्षय वा खरोंचको प्रतिरोध गर्न सावधानीपूर्वक बनाइएको थियो। तसर्थ यो सधैं यो राम्रो आकार राख्नको लागि यो म्याट कालो बाथरूम नल राम्रोसँग धुने र सम्भार गर्न सम्भव छ। असाधारण कालो कोटिंगमा आधुनिक लुकको साथ बाथरूमको नल प्रदान गर्दछ जुन कुनै पनि डिजाइन बाथरूमको अभिन्न शैलीको भाग बन्छ। यसबाहेक तपाईले आफ्नो स्नान र नुहाउने ट्युबको लागि समान स्टाइल गरिएको बाथरूम नलहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणको लागि, तपाईंको बाथरूमको बाँकी भागसँग एक हार्मोनिक भाग बनाउन।
उच्च चाप मैट कालो बाथरूम नलमा 5.8 इन्चको कार्यात्मक gooseneck सिल्हूट फिचर गर्दछ। बाथरूम सिंक टाउकोले कुशल धुनेको लागि पर्याप्त पहुँच प्रदान गर्दछ। पानीको प्रवाह सहज र स्थिर छ। यस बाहेक, यो उच्च गुणको टाउको एन्टी-स्प्लेटर हो, त्यसैले तपाईं बाथरूम सिink्कमा आफैलाई धोउँदा तपाईं आफ्नो लुगा भिजाउने छैन। अन्तत: तपाईंले पानीमा पुग्न आफ्ना हथेलीहरू विस्तार गर्नुपर्दैन, किनकि अभिनव gooseneck डिजाइनले तपाईंलाई पानी चाहिन्छ जहाँ तपाईंलाई पानी चाहिन्छ। तपाईको डिजाईन पूर्ण गर्न तपाईको बाथरूम सिंकमा एक सामञ्जस्यपूर्ण संयोजन बनाउन तपाईले समावेश गरिएको पप-अप स्टापर पाउनुहुनेछ।
उत्कृष्ट गुणस्तरको म्याट कालो बाथरूम नल
WOWOW ले यसको बाथरूम फालहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गर्दछ। यसको अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाहरूले यसका सबै कम्पोनेन्टहरूको सटीक उपायहरू र क्यालिब्रेसनको ग्यारेन्टी गर्दछ। WOWOW को एक बाथरूम नल त्यसैले एक अभिन्न गुणात्मक एकाई हो कि अधिकतम प्रदर्शनको लागि बनाईएको हो। कुनै चीजको लागि होईन जुन अमेरिकी परम्परागत स्टेनलेस स्टील किस्तको साथ उपयुक्त छ। WOWOW को म्याट कालो बाथरूम नलको ड्रिप-फ्री सिरेमिक डिस्क कडाईमा बन्द गरिएको छ। विश्लेषकहरूले देखाउँछन् कि ड्रिप मुक्त ब्रास डिस्क अझै पनी 500,000 चक्र पछि ट्रिकल मुक्त छ।
WOWOW को म्याट कालो बाथरूम नलको लिभर ह्यान्डल अत्यन्त लचिलो छ। तपाईं पानीको तापक्रम सजिलैसँग नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ र अझै पनि तापमान स्टेपलेस नियन्त्रण गर्न पर्याप्त पकड प्रदान गर्दछ। थप रूपमा, म्याट कालो बाथरूमको नलको बृद्धि टिकाउ हुन्छ किनकि नलको शरीर ठोस ब्रासबाट उच्च गुणवत्तायुक्त कम्पोनेन्टहरूको साथ निर्माण गरिएको हुन्छ। जब तपाईं आफ्नो हातमा WOWOW को यो म्याट कालो बाथरूमको नल समात्नुहुन्छ, तपाईं तुरून्त यसको प्रस्तावको गुणवत्ता देख्नुहुन्छ।
उचित मूल्य म्याट कालो बाथरूम नल
उच्च गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरेर, WOWOW अझै पनि तपाईंलाई यो म्याट कालो रसोईको नल उचित मूल्यमा प्रस्ताव गर्दछ। WOWOW सबै भन्दा पहिले थाहा छ कि कहाँ उचित मूल्यहरु मा कच्चा माल किन्न। दोस्रो, WOWOW को अल्ट्रा-आधुनिक उत्पादन सुविधाहरूले कम लागतको उत्पादन प्रक्रियाको ग्यारेन्टी गर्दछ। यस तरिकाले तपाई यी सुविधाहरूबाट फाइदा लिनुहुन्छ र एक स्टाइलिश उच्च गुणस्तरको म्याट कालो बाथरूम नलको सुनिश्चित हुन्छ, जुन तपाईं फेला पार्नुहुने सबै भन्दा राम्रो मूल्य-गुणस्तर अनुपात हो। जब तपाईं WOWOW को म्याट कालो बाथरूम नल खरीद गर्नुहुन्छ, तपाईं सजिलैसँग यो म्याट कालो बाथरूम नल स्थापना गर्न आवश्यक सबै चीज प्राप्त गर्नुहुनेछ। पप-अप ड्रेन स्टपरको बाहेक, १ वा hole प्वाल स्थापनाको लागि मानार्थ एस्कुटचेन पनि सामेल छ। तपाईलाई आवश्यक पानी जडानहरू भेट्टाउनुहुनेछ सहज-स्थापना गर्न सजिलो बनाउनको लागि। WOWOW का सबै बाथरूम faucets अन्तत: एक पूर्ण-बर्षे वारंटी अवधि,-० दिनको पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी र अन्तर्राष्ट्रिय निःशुल्क शिपिंगको साथ आउँछ!
संक्षेपमा म्याट कालो बाथरूम नलका फाइदाहरू:
Ressive प्रभावशाली म्याट कालो रंग
 स्टाइलिश आधुनिक gooseneck डिजाइन
 अन्य म्याट कालो बाथरूम faucets संग संयोजन गर्न सजिलो
SKU: 2321501B विभाग: बाथरूमको नल, एकल ह्यान्डल बाथरूम नल टैग: डेक प्लेट, lavtory नल, पात्र सिंक
23.5 x 11.7 x3इन्च
दोहोरो मोड: स्प्रे मोड / स्ट्रिम मोड
WOWOW ब्रश निकल बाथरूम नल केन्द्र